Toriteny alahady 18 mey 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 18 mey 2014
« Mamonjy amin’ny fitiavan-tena ny Tompo »
Hagay 1:1-15 / Matio 18:21-35 / Hebreo 13:1-6
“….Hevero ny lalanareo . …’ Hagay 1 : 5
Ahoana no tokony ataoko mba ahazoako fahombiazana amin’ny fiainana ?
Tena sarotra ny fiainana eo anivon’ny firenena . Mihasarotra ny fifandraisana eo anivon’ny fiaraha-monina Miharava ny firahalahiana eo amin’ny mpianakavy. Naniraka an’i Hagay mpaminany Andriamanitra mba hitondra vaha olana ho an’ny Zanak’Israely.
Maniraka ny mpanompony koa Izy amin’ny alalan’izao toriteny izao hitondra vahaolana ho amin’ny fiainan’ny firenena sy ny ankohonana Malagasy izay tsy mety tafarina mihitsy.
Araho ary ireto torolalana omen’Andriamanitra anao ireto.
1- Mandiniha tena
And 5: Rava ny Tempoly, lasa babo tany Babylona nandritra ny 70 taona ny Zanak’Israely izay firenena voafidin’Andriamanitra. Asaina maka lesona amin’ny lasany avy ny Zanak’Israely ka handray fanapahan-kevitra hiatrika tsara ny akehitriny sy hibanjina ny ho avy. Nitarika azy ho amin’y fiaiken-keloka ny fahapotehina niainany.
Lesona : Mivavaka aho nefa tsy mety misy famirapiratana ny tokantranoko, fiainana tsy mety tafavoaka, olana ara-bola, mpivady mifanditra, zanaka maditra sns….
Diniho ny fiananao, handraisana fanapahan-kevitra hanatsarana ny ho avy mbola atrehina :
Fanontaniana : Nanao ahoana ny fifandraisanao tamin’Andriamanitra ? Nanao ahoana ny fiainam-panahinao manoloana ny asa fanompoana, ao an-tokantrano, ny asa fivelomana sns…..
2- Ataovy ho laharam-pahamehana ny asan’Andriamanitra
Feno fitiavan-tena mantsy ny Zanak’Israely ka samy nihazakazaka nanao ny tranony fa tsy niraharaha ny Tempolin’Andriamanitra na dia hita fa efa rava aza. Cf : nanampo be kanjo kely ihany no notaomina sns….
Lesona : Fanalahidin’ny fahombiazana eo amin’ny fiainana ; ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny asan’Andriamanitra. Hevero tsara izay nametrahan’Andriamanitra fitokisana taminao ary tokony ho tanterahina am-pitiavana fa tsy atao zara fa vita.
Ny lesoka eo amin’ny mpanompon’Andriamanitra dia ny ampahany amin’ny fiainantsika ihany no fointsika ho an’ny Tompo ; toy ny ampaham-potona, ambim-bola, ampahany amin’ny tenako.
3- Aza manao andraso andraso fa rehefa tapa-kevitra dia atomboy
Misy ny manjeny andro ho lava, manapin-tsofina eo anatrehan’ny iraka ampanaovina, satria ny fitiva-tena no manjaka. Ny ahy aloha no fantatro zay aho vao mihevitra ny an’ny Tompo na ny an’ny hafa . Tsarovy fa ny fitahiana sy ny fitsaharana dia miankina tanteraka amin’ny faharisihina amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.
Lesona : Tsarovy fa ny an’Andriamanitra aloha vao ny an’ny tena, adidy mankadiry napetrak’I Jesoa Kristy ny asam-pamonjena, izay asaina tohizantsika manaiky hanara-dia Azy.
Hafatra : Ampy izay ny fitiavan-tena hieverana foana izay ho hanina, na hosotroina na ho tafiana, ny asako, ny zanako, ny tokantranoko sns… , “Fa katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra « .
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen !
ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 19 mai 2014